Vacuum Cleaner (3) Factory - China Vacuum Cleaner (3) Mpanamboatra, mpamatsy
10L / 15L Manadio karazana vacuum madio - HT-10S / HT15S / 15J
Ny antony mahatonga ny herinaratra be loatra dia ny tabataba, ny olana manamarika indrindra amin'ny mpanadio banga, fa ny ankamaroan'ny faritra ampahibemaso dia tsy afaka mandray tabataba avy amin'ny milina fanadiovana amin'ny fotoanan'ny asa. HT-10S dia mpanadio banga karazana moana, afaka mihetsika ny vatana kely ary mora ny mitahiry.
20L / 32L / 45L Manadio vovoka maina maina YJ1020 1032 1245
Ny mpanadio vovo mando sy maina dia mitovy amin'ny mpanadio fitoeram-bary fototra, natao hizahana ny raraka amin'ny rano toy ny kodiarana toy ny vovoka sy vovoka maina. Nampiasaina indrindra ho an'ny asa mavesatra andraikitra izany, indrindra amin'ny fananana ara-barotra. Na izany aza, ny maodely vaovao sy matevina amin'ny habe samihafa dia noforonin'ny mpanamboatra hampiasaina an-trano.
15L / 32L / 45L Mando vovoka maina maina BS-1020A 1032A 1245A
Ny mpanadio banga tsirairay avy dia misy fametahana maromaro. Ny fifamatorana tsirairay dia misy fampiasana manokana, ary ny karazana asa fanadiovanao izay hidiranao dia tokony hamaritra ny fifamatorana ampiasainao.
15L / 30L Manadio vacuum mando sy maina H6001 H6002 H6003
Ny mpanadio banga tsirairay avy dia misy fametahana maromaro. Ny firaketana tsirairay dia manana fampiasana manokana, ary ny karazana asa fanadiovana ianao a. Ny banga mando sy maina dia fitaovana tena ilaina noho ny fahaizany sy ny fampiasana azy. Mahaliana fa tsy vitan'ny fanadiovana potipoti-javatra fotsiny, fanesorana vovoka ary hitsentsitra ranon-javatra fotsiny, fa izy io koa manana ny fahaizana manao asa marobe toa ireto voalaza etsy ambany ireto.
Ny sivana lamba ao anaty dia mamela anao hanadio ny banga mora kokoa ary afaka miaro ny banga amin'ny fahasimban'ny vovoka.
70L / 80L Manadio vacuum mando sy maina miaraka amin'ny H6006 H6007 squeegee
Ny famolavolana ny banga no mahatonga ny asa fanadiovana ho lasa mahomby sy mora kokoa.
15L / 30L / 60L / 80L Fanasana madio sy maina ary maina LC151, LC301, LC602S, LC 802S
Ilay mpanadio vovo maina lena matetika mazàna amin'ny fomba tsotra. Izy io dia mampiasa rafitra siny roa izay ampiasaina amin'ny fanasarahana ireo poti-tsiranoka amin'ireo mafy. Ilay mpanadio koa dia manana seranan-tsakafo mandray izay mitsentsitra ny loto rehetra izay mihetsika manaraka ny fantsona iray miaraka amin'ireo fako hafa izay nifoka.
90L Manadio vacuum mando sy maina H6015 H6016
Ny tanky plastika semitransparent, tsy misy asidra ary anti-alkalis, ary fanoherana ny collisy.